Maxay yihiin siyaabaha la taaban karo ee lagu hagaajinayo iibka Amazon?
Suuqa suuqa Amazon waa madow dahab ah ee ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar. Waxay siinaysaa fursado ay ku iibiyaan alaabooyinka dadka aduunka oo idil iyo si weyn u kor u qaadida wacyigaaga.
Qofkasta oo ka hadlaya tartan xoogan oo ku saabsan Amazon, fikradahaasna aysan ahayn sabab la'aan. Malaayiin ka mid ah suuqyada ayaa halgan u ah macaamiisha cusub maadaama ay ogyihiin awooddooda ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, dhanka kale, Amazon waxa uu helaa ku dhowaad 90 milyan oo booqasho oo u gaar ah bishiiba, haddii aad leedahay hab xeeladaysan oo ganacsigaaga ah, waxaad ku jiri kartaa inaanad weli ogaan. Sida laga soo xigtay tirakoobyada warshadaha Amazon, suuqyada cusub ee suuqa iibiya waxay inta badan arkaan boqolkiiba 50 korodhka dakhliga guud, markay iibiyaan Amazon si sax ah. Tirooyinkan dhiirrigelinta ah ayaa muujinaya in qof kasta uu leeyahay fursad uu ku barwaaqoobo Amazon. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad noqotaa mid joogto ah oo aad ogaatid tabaha qaar sida aad labalaabi karto dakhligaaga.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa qaar ka mid ah siyaabooyin loo xaqiijiyey sida loo horumariyo aad iibka Amazon oo ka baxsan dadka.
Furaha guusha iibinta on Amazon
Si aad u noqoto iibiyaha barwaaqo ah ee Amazon, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad gaarto kartidaada. Sidaa darteed, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo xaqiijiyey sida aad u hagaajin karto iibkaaga Amazon.
Bixinta qiimaha tartanka
Qiimaha ayaa ah qodobka muhiimka ah ee Amazon. Waxay u adeegtaa sida kala-guuraaga oo kala tagay hal ganacad oo kale. Isticmaalayaasha Amazon waxay si fudud u barbar dhigi karaan qiimaha, helitaanka qiimaha ugu qiimaha badan iyaga. Sidaas darteed, haddii aad rabto inaad ku guuleysato Box Buy oo aad ku jirto TOP ee bogagga natiijooyinka raadinta ee Amazon, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u noqoto inaad ku tartanto qiimaha. Waa inaad hore u sii fekertaa sida aad u yareyn karto kharashkaaga si looga fogaado khasaaraha. Kaliya liistada alaabooyinka leh marinka ku filan si aad ugu tartamaan Amazon oo wali waxaad bixisaa sicir macquul ah oo soo celin ah oo la siiyay, iyo kharashyada guud. Waxaa intaa dheer, waxaa haboon in la xuso in iibinta on Amazon noqon kartaa qaab wanaagsan oo ah xayeysiis kaas oo aan u baahan ganacsatada si aad u iibsato xayeysiis iibsashada-per-click.
Ku dheji faa'iidooyinka wax soo saarka, maaha sifooyinka
Amazon waxay bixisaa ganacsato leh dhawr qaybood oo ay ku tirin karaan waxtarradooda wax soo saarka. Waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qaybaha mawduucyada aragtida si ay u muujiyaan macaamiishaada ma aha oo keliya waxyaabaha ku jira alaabtaada laakiin sidoo kale dhibcahooda xoog leh. Samee faashad ku saabsan macluumaadka sida alaabtaadu u caawin karto macaamiisha arrimaha ay maalin walba u leeyihiin. Ka jawaab macaamiishaada su'aasha ah "Maxay aniga igu tahay?" Iyo waxaad ku dhigi doontaa daacad u ah astaantaada.
La soco macaamiishaada
Dhamaan ciyaarta ma aha marka macaamiil ka iibsado dukaankaaga. Taas ka dib, waxaad u baahan doontaa inaad siiso taageerada macaamiisha xirfadeed. U soo wargeli habka gaarsiinta iyo ka digo dib-u-dhac kasta. Isla marka uu macaamilka iibsado iibsasho, la xiriir isaga si aad u weydiisatid jawaab celin. Waa hab fiican oo lagu tusi karo macaamiishaada aad uga mahad celineyso. Macluumaadkan ayaa kaa caawin doona inaad fahamto haddii alaabtaada ay ku haboon tahay baahida suuqa ama maahan. Intaa waxaa dheer, adigoo macaamiisha weydiinaya waayo-aragnimadooda, waad sii hagaajin kartaa ganacsigaaga iyo kor u qaadida daacadnimada macaamiisha. Suuqa macaamiishaada Amazon
Dhammaan dadka isticmaala iibsashada Amazon waxaa loo tixgelin karaa macaamiisha Amazon. Si aad macaamiishooda uga dhigto oo aad u kasbato iibka mudada dheer, waxaad ku siin kartaa dukaameeyayaasha qiimaha dhimista iibkooda soo socda. Waxaa intaa dheer, waxaad isticmaali kartaa shahaadooyinka iibinta iyo bixinta. Caddeyn Bulsheed
Ka hor intaadan wax iibsanin Amazon, badana iibiyayaashu waxay hubiyaan dib u eegida alaabta si ay u fahmaan haddii Waxay kuugu kalsoonaan karaan sida iibsadaha la isku halleyn karo ama aan ahayn. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la horumariyo caddayn bulsho leh dib-u-eegis wanaagsan iyo mid organic. Iska hubi in dhammaantood si isku mid ah loo abuuray sababtoo ah Amazon waxa ay ku dhibtoonayaan ka jawaab celinta dhiirigelinta ah. Xitaa ha ka fikirin iibsashada dib u eegista. Waxay burburinaysaa sumcaddaada daqiiqad. Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo lagu soo saaro dib-u-eegis wax ku ool ah oo quruxsan iyada oo aan la jebinin xeerarka. Tusaale ahaan, waxaad ku siin kartaa dukaameeyaha taageerada macaamiisha ee ugu fiican iyo qiimo jaban.
ha dayacin adeegyo xayaysiis
Haddii aad raadineyso fursadaha inaad iibiso wax ka badan oo aad rabto in aad booddo tartankaaga, waxay u baahan yihiin inay maalgashadaan Amazon advertising. Waxaad abuuri kartaa xayeysiin badeecad ah oo lagu maal-galiyo si aad u muujiso alaabtadaada TOP ee bogga natiijooyinka raadinta ee Amazon. Xaaladdan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso qof kasta oo isticmaalkiisa gujinaya cinwaankaaga. Amiirku wuxuu ku xirnaan doonaa heerka tartanka suuqa dhexdiisa. Hab kale oo lagu hormariyo alaabtaada Amazon waa in la abuuro cinwaanka cinwaanka ah. Xayeysiintan ayaa sidoo kale ka muuqan doonta TOP ee bogga natiijooyinka raadinta ee Amazon. Farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya cinwaanka raadinta ee cinwaanka iyo sheyga wax soo saarka ee la kafaala qaaday waa in cinwaanka raadinta ee cinwaankiisu uu eegayo ugu sareysa natiijooyinka raadinta. Si kale haddii loo dhigo, waxaad heleysaa fursad aad kaga soo baxdo dad badan oo soo jiidata gaadiidka sare ee alaabooyinkaaga. Ugu dambeyntiina, waxaad isticmaali kartaa xayeysiiska wax soo saarka. Xayeysiintan ayaa u muuqata dhinaca daaqada marka ay isticmaalayaashu fiiriyaan faahfaahinta shay gaar ah.
Dabcan, ma aha dhammaan siyaabaha xayeysiiska Amazon ayaa si isku mid ah waxtar u leh. Si kastaba ha ahaatee, marna ma ogaan kartid ilaa aad isku daydo. Taasi waa sababta aad u tijaabin karto mid ka mid ah adeegyada advertising ee Amazon ku saleysan hannaanka ganacsiga iyo ujeedooyinka. Iyo haddii ay soo saarto celin wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga, markaa waa u qalantaa.
Amazon waa kan iibka weyn ee ganacsiyada oo dhan. Waxay noqon kartaa mid asaasi ah ama siyaabo dheeraad ah oo lagu kasban karo dakhliga. Waxay bixisaa kordhinta iibka oo kaliya iyo hagaajinta wacyigelinta astaanta, laakiin sidoo kale waa fursad aad ku iibiso alaabtaada aduunka oo dhan. Waxkasta oo aad u baahan tahay waa inaad sameyso miisaan aad u muhiim ah sababtoo ah dadaalka si aad u istaagto si aad faa'iido ugu hesho ganacsigaaga cusub. Ha lumin fursadahaaga dhabta ah si aad u noqotid ganacsato barwaaqo ah oo ka shaqeeya astaanta astaantaada ee Amazon Source .